Imveliso yabanye-iTshayina Abanye abaenzi kunye nababoneleli
Into ongayi kuhlawula kakhulu ebomini ngelixa yayizizinto ezincinci onokuzisebenzisa ukuphucula ubomi bakho, yiyo loo nto izinto zentengiso kunye nezipho zivela, kwaye xa kufikwa ekuthatheni loo nto ukuba ibe yeyakho, uze ku-Pretty Izipho eziKhanyayo. Ukuba ngumenzi wobuchwephesha, siyifektri enamava amashumi amaninzi amava kwizinto zobugcisa zesinyithi ezenziwe ngokwezifiso. Nokuba ungoyilo okanye akunjalo, Izipho eziCwebezelayo. Iqela legcisa lobugcisa ukuba liyizobe, abasebenzi bethu abanezakhono kunye noomatshini baya kubeka uyilo olusephepheni lube yinyani. Izinto ezinenkampani yakho okanye igama lebrendi ukufezekisa indlela yentengiso ephantsi okanye ukhethe ukuqhubekeka okungcono ukwenza into enje ngeziqeshana zemali, amanqaku encwadi, imihombiso, i-ID tag kumgangatho wokuqala kwaye uthumele njengezipho, iimveliso ezinkulu ezinjengeDisney, iCoca cola , McDonald's, Walmart, Starbucks, sikhethe, kutheni kungenjalo?
Amanqaku eNcwadi kunye neMifanekiso yePhepha
kwendawo yokuhlala ibhegi
Ukuxhonywa kwebhegi kunye nokuKhangela okuPhambili
I-Aromatherapy Car Diffuser Locket
IAluminiyam Ipakethi yeBaton